Garoonka diyaaradaha magaalada Cadaado oo adeegyo cusub lagu soo kordhiyay+Sawirro – Radio Muqdisho
Garoonka diyaaradaha magaalada Cadaado oo adeegyo cusub lagu soo kordhiyay+Sawirro
Garoonka diyaaradaha degmada Cadaado ee gobolka Galguduud ayaa lagu soo kordhiyay adeegyo cusub oo ka qeyb qaadanaya habsami u socodka howlaha garoonka.
Adeegyadaan ayaa isugu jira kuwo u gaar ah dadka ka dhoofa ama kuwa ka soo daga garoonka iyo adeegyo gaar u ah diyaaradaha garoonkaasi isticmaala.
Maamulka garoonka diyaaradaha magaalada Cadaado ayaa sare u qaaday adeegyada ay gudaha garoonka ka heli karaan dadka ka dhoofa ama ka soo daga, waxaana ka mida, goobaha nasiinada oo dib u dayactir iyo qalabeyn lagu sameeyay.
Sidoo kale garoonka ayaa hada awood u yeeshay in diyaaradaha kala duwan ee ka shaqeeyaahu ka heli karaan shidaalka diyaaradaha, waxa ayna noqoneysaa markii u horeysay ee garoomada gobolada dhexe ee dalka ay ku guuleystaan suurta galinta adeegaasi oo shirkadaha diyaaraduhu aad u cabtaan.
Sidoo kale waxaa sare loo qaaday dhanka amaanka garoonka diyaaradaha magaalada Cadaado, iyadoona la sameeyay dhowr bar oo lagu hubiyo dadka gudaha u galaya garoonka.
Madaxweynaha JFS iyo wefdi uu hugaaminayo oo si heer sare ah loogu soo dhaweeyay magaalada Nairobi+Sawirro
Marwada koobaad ee qaranka oo Mareykanka ka bilowday dardar-gelinta Ol-ole loogu gurmanayo dadka fatahaaddu ay saameeyeen+Sawirro